धरानका चार वटा वडामा वित्तिय साक्षरता र मनोपरामर्श कक्षा सञ्चालन हुँदै - Everest Daily News
धरानका चार वटा वडामा वित्तिय साक्षरता र मनोपरामर्श कक्षा सञ्चालन हुँदै
धरान । धरानमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) स्वीस सरकार र हेल्भीटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा वित्तिय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका र यूथ क्रियशनबिच २०७६ पौषमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजना स्वीस सरकारको सहयोगमा र हेल्भाटस नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता बमोजिम धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ५, १४, १५ र १७ मा २४ हप्ताको वित्तिय साक्षरता र मनोपरामर्श कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । २०७७ मंसिर १२ गतेदेखि वडा नं. ५ मा हप्ताको शुक्रबार १ बजेदेखि ३ बजेसम्म कुुलुङ भवनमा कक्षा सञ्चालन भैरहेको छ भने ०७७ पौष १३ गतेबाट वडा नं. १४ मा सोमबार २ बजेदेखि ४ बजेसम्म जर्मन भवनमा कक्षा सञ्चालन भैरहेको छ । यस्तै २०७७ मंसिर २३ गतेबाट वडा नं. १७ मा मंगलबार १२ देखि २ बजेसम्म फोकल्याण्ड समादुयिक भवनमा कक्षा सञ्चालन भैरहेको छ भने २०७७ माघ ४ गतेबाट १५ नं. वडामा आइतबार १ः३० देखि ३ः३० बजेसम्म गणतन्त्र सामुदायिक भवनमा कक्षा सञ्चालन भैरहेको छ ।
२४ हप्ताको कक्षामा १९ हप्ताको वित्तिय साक्षरता कक्षा हुने छ भने ५ हप्ताको मनोपरामर्श कक्षा सञ्चालन भईरहेको यूथ क्रियशनका अध्यक्ष अमर बहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय धरानको हाताभित्र २०७६ माघ ९ गतेदेखि आप्रवासी स्रोत उप केन्द्र सव एम आरसि सेन्टर सञ्चालन भैरहेको छ । धरानमा अहिलेसम्म ४ जनाले मात्र वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको उजुरी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले १४ जनाले मनो सामाजिक सेवा लिईरहेको छ । उनीहरुको सुधार हुँदै गएको छ ।’ कुनै पनि व्यक्ति मानसिक रुपमा समस्या नहोस भनेर मनोपरामर्श कक्षा सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कोरोनाको बिषम परिस्थितीमा पनि संचार माध्यम (मोवाइल) मार्फत धरानमा कोरोना भाईरस संक्रमण भएका १२, गन्तव्य मुलुकमा काम गुमाएका २२, परिवारसँग छुट्टिएर बस्नु परेको १०, दैनिक जिवनयापन गर्न समस्या भएका २५, कोभिड १९ को अन्यौलतामा परेका ३८ लगायत १३८ जना सेवाग्राहीलाई सेवा दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बुधबार धरान उपमहानगरपालिमा नगर प्रमुख, कर्मचारी, यूथ क्रियशन, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) र हेल्भीटास नेपालका प्रतिनिधि बिच सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सम्बन्धमा अन्तरक्रिया भएको हो । धरानको हकमा ९ जना समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराएको जसमध्ये २ जना बिचमा सेवा लिन छाडेको, ४ वटा समुहमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराएको, वैदेशिक रोजगारमा अप्ठ्यारोमा परेकालाई पनि परामर्श गरेको र एम.आर.सि.मा पठाएको, वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेकाको सहयोगका लागि इ.प्र.का. धरानसँग समन्वय गरेको र नगरका सबै वडामा वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्या परेकालाई मनोपरामर्शका लागि वडासँग समन्वय गरिएको जनाएको छ ।
हालसम्म १६५० जना विभिन्न देशमा जानका लागि पासपोर्ट बनाउन आउने व्यक्तिहरुलाई गन्तव्य देश सम्बन्धी जानकारी गराइएको छ । जस अन्र्तगत २० प्रतिशत महिलाले वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि पासपोर्ट बनाएको सामी परियोजनाले उल्लेख गरेको छ ।
परियोजनाकी प्रदेश एक संयोजक कोपिला दाहालले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा बोल्दै देशभर ३९ वटा जिल्लामा परियोजनाको शाखा रहेको जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेश एकको भोजपुर, इलाम र उदयपुरले आफै परियोजना सञ्चालन गरिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले मानिसहरुमाँझ सुचनाको पहुँच नभएका कारणले गर्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा ठगिने गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि सुचना तथा परामर्श दिने धरानमा पनि प्रावधान बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको बारेमा प्रत्येक वडा वडामा सुचनाको पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर बेरोजगार मानिसहरुलाई सिपमूलक तालिमहरु दिन सकियो भने नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो । खाडी मुलुकमा जानेहरुका लागि सिपको व्यवस्था पनि गरिएको बताउँदै उहाँले खाने र बस्ने सामी परियोजनाले निःशुल्क गर्ने गरेको बताउनुभयो । यदि वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा परियोजनाले सहजिकरण गर्न सक्नेछ । उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उनीहरुसँग भएका सिपमार्फत व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ऋण राष्ट्र बैंकमार्फत ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न पालिकाहरुले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर यस्तो कार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि जनप्रतिनिधिहरुले वैदेशिक रोजगारको बारेमा अलिक गहन ढंगले बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगार एउटा बाध्यता रहेको भन्नुहुँदै, ‘देशको मूख्य अर्थतन्त्र नै वैदेशिक रोजगारले धानेको छ । कतिको बाध्यता हो, कति मानिसहरु रहरले पनि गईरहेको अवस्था छ ।’ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्याको समाधानको बारेमा स्थानीय सरकार जागरुक हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले परियोजनाबाट धेरै लाभ लिन सकिने बताउदै व्यवसायिकरण र सिप विकासको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
उर्लाबारीमा प्रहरीद्वारा १८५ राउण्ड गोली बरामद
आज – २३ माघ २०७७ शुक्रवार को राशिफल